Taariikhda Xidigii hore Pele –
Home TAARIIKHDA Taariikhda Xidigii hore Pele
Taariikhda Xidigii hore Pele
Xariif-halkan hadan kusoo gudbino taaariikhdii xidigii hore ee reer Barasiil Pelé, oo ku magac dheer Edson Arantes do Nascimento, (wuxuu uu dhashey Oktoobar 23, 1940, Três Corações, Brazil), halyeygii hore ee kubada cagta , waqtigiisii wuxuu ahaa xidiga ugu caansan uguna wanaagsan kubada cagta waana mid ka mid ah Ciyaarnahada ugu caansan adduunka uguna sumcad badan. Wuxuu ka mid ahaa xulka qaranka Brazil ee ku guuleystay seddex koob adduun (1958, 1962, iyo 1970).
halka uu ka bilaabey kubada cagta iyo kooxaha uu usoo ciyaarey hadii aan ka warano waxaa u ciyaarayay koox ka ciyaarta horyaalka heerka hoose gobolka Bauru, São Paulo state, Pelé (oo naaneystiisu u muuqato mid aan muhiim aheyn) waxaa diidey kooxaha waa weyn ee magaalada São Paulo. Sannadkii 1956, si kastaba ha noqotee, wuxuu ku biiray Santos Football Club, oo noqotey kooxdii ugu horeys ee uu u ciyaara Pele.
kaasoo uga ciyaarey dhanka weerarka bidix waxaan uu ku guuleystay sagaal horyaal oo São Paulo iyo 1962 iyo 1963, iyo labadaba Koobka Libertadores iyo Intercontinental Club Cup. Mararka qaar waxaa loo yaqaan “Pérola Negra” oo ah kalmid latini ah oo macne heedu tahay luulkii madoobaa (“Black Pearl”), wuxuu noqday geesi qaran oo reer Brazil ah. Wuxuu isku daraysadey awooda laadida iyo saxsanaanta iyo awoodo cajiib ah oo laga filan karo dhaq dhaqaaqa ciyaartoyda.
Kadib Koobkii Adduunka ee 1958, Pelé waxaa loogu dhawaaqay inuu yahay hanti qaran si ay uga horjoogsato dalabyada waa weyn ee kooxaha reer yurub si aaney u siinin dhalaso si uu ugu ciyaaraha wadankooda.
kadib markii lagu darey xulka qaran Barasiil oo isla markaana xaqiijisey inuu baaqi kusii ahaan doono Brazil.
Markay taariikhdu ahayd Noofambar 20, 1969, kulankiisii ​​909aad ee heerka koowaad, wuxuu dhaliyay goolkiisii ​​1,000aad.
La wadaag asxaabtaada oo sii share Garee
la soco Qaybta 2aad Ee Taariikhda Xidiga Pele